Website – ZMC
Open/Close Menu ZMC	Zotung Media Center - Watch Event Videos, Photos and More !
NetScriper မှ လှပသေသပ်၍ နိုင်ငံတကာ စံချိန်မီ Website Design များကို စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ရေးဆွဲပေးနေပါသည်။ Web page ၁၀ မျက်နှာမှစ၍ သင်ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်နိုင်သော CMS များ၊ International Bank API များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ Online တွင်ရောင်းချနိုင်သော E-commerce website များကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
It’s time for Responsive
ယနေ့ခေတ်တွင် Internet ကို ကွန်ပျူတာများမှသာမက Mobile phone, Tablet device များမှ အသုံးပြုသူ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ သင်၏ website ကို ထိုသူများ လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုကာ Touch လုပ်ခြင်း၊ Swipe / Scroll လုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် Responsive Web Design အား အထူးစီမံရေးဆွဲပေးပါသည်။
*Fully Responsive ဖြစ်ခြင်းကြောင့် Internet ချိတ်ဆက်ထားသော မည်သည့် device နှင့်မဆို အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
*မည်သည့် Web Browser နှင့်မဆို compatible ဖြစ်ခြင်း
*နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများဖြစ်သည့် HTML5, CSS3 & jQuery ကို အသုံးပြုထားခြင်း
*၀ါရင့် မြန်မာနည်းပညာရှင်များမှ 100% hand-coding ပြုလုပ်ပေးခြင်း
*Mobile device များမှ သင်၏ Website/စီးပွားရေးအား လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ခြင်း (Mobile SEO)
NetScriper တွင် website ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ယူနိုင်သည့် အချက်များမှာ
သင်၏ website သည် –
*Search Engine Friendly ဖြစ်သောကြောင့် သင်၏ Website/စီးပွားရေးအား Internet တွင် လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ခြင်း
*W3C Standard နှင့် ကိုက်ညီခြင်း
*Mobile, Tablet နှင့် Desktop / Laptop များအားလုံးတွင် လိုက်လျောညီထွေစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း
*ပေါ့ပါး၍ လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
*ZMC မှ သင်၏ Domain, Website, Design အားလုံးအတွက် တာဝန်ယူပေးခြင်း စသည် တို့ဖြစ်ပါသည်။
1200 Premium Icon Set.
© 2019 ZMC